Madaxweynaha Puntland oo la kulmay madax ka tirsan hey’adda FAO (Sawirro) – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay madax ka tirsan hey’adda FAO (Sawirro)
Madaxweynaha Dawlad gobolleedka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 24-2-2015 aqalka madaxtooyada Dawladda Puntland ee Garoowe kula kulmay Agaasimaha Hay’adda FAO ee Soomaaliya Mr. Richard Trenchard iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminayey.
Ka qeyb galka kullanka ee dhanka Puntland waxaa madaxweynaha ku wehliyey Wasiir Dawlaha Madaxtooyada iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Puntland Maxamed Cabaas Cumar, Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Puntland Deeq Sulaymaan iyo saraakil katirsan Madaxtooyada Dawladda Puntland.
Qodobadii ugu muhiimsanaa ee kullankaasina looga hadlay waxaa kamid ahaa dardar-gelinta Mashaariicda horumarineed ee hay’adda FAO ay ka fuliso guud ahaan Gobolada Puntland, xoojinta xiriirka wada shaqeyn ee u dhaxeeya dawladda Puntland iyo hay’adda FAO, Talaalka Xoolaha , Horumarinta Beeraha Puntland, Kalluumaysiga iyo ka qeyb qaadashada doorka kaga aadan Hay’adda FAO ee horumarinta deegaanada ku yaala xeebaha Puntland.
Si wadajir ah ayaa waxaa kullanka dib u eegis loogu sameeyey qorshihii hay’adda FAO sanadkii tagey 2014 ee Puntland, sidookalana waxa ay masuuliyiinta hay’addaas Madaxweynaha u soo bandhigeen qorshahooda horumarineed ee sanadkaan 2015 ka fulinayaan guud ahaan Gobolada Puntland.
Madaxda Hay’adda FAO ayaa si wadajir ah u balanqaaday sii wadida taageerada ay Puntland ka siiyaan dhanka horumarinta xoolaha oo ugu wayn ilaha dhaqaalaha, sidookalana waxay sheegen inay qeyb weyn ka qaadanayaan kobcinta wacyigelinta kaluumeysiga iyo ilaalinta deegaanka.
Agaasimaha Hay’adda FOA ee Soomaaliya Mr. Richard Trenchard iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxaa ay kulamo la qaadaan doonaan madaxda Wasaaradaha Puntland sida Wasaarada Beeraha iyo Waraabka Puntland, Wasaarada Kalluumaysiga iyo Kheyraadka badda ee Puntland iyo Wasaarasada Xanaanada Xoolaha.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dawlad gobolleedka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa islamaanta gelinkii dambe qasriga madaxwtooyada Puntland waxaa uu kula kulmay masuuliyiin ka socday hay’adda Diakonia, kuwaasi oo ay kawada hadleen mashaariicda ay ka fuliyaan Puntland gaar ahaan dhinacyada Waxbarashada iyo hirgelinta hanaanka dimuqraadiyada Puntland.
Dhammaan kullamadaas uu Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas la qaatay masuuliyiinta ka socday Hay’adda FAO iyo Hay’adda Diakonia ayaa ku soo dhammaaday guul iyo is afgarad.
Marwada madaxweynaha oo booqatay dadkii ku dhaawacmay qaraxii Central (Sawirro)
Barcelona oo Ka Badisay Manchester City iyo Juventus oo Ka Adkaatay Dortmund ”SAWIRRO”